Dumarka shuunkooda badan yahay oo la ogaaday in….. - iftineducation.com ≡Navigasi Menu
→ Dumarka shuunkooda badan yahay oo la ogaaday in…..
Dumarka shuunkooda badan yahay oo la ogaaday in…..
iftineducation.com - Bilcaamha labo nooc ayay u kala baxaan, bilcaan shuun badan leh iyo bilcaan shuun xaado ah leh.
Naagaha shuunka badan waxaa laga wadaa naagaha jirkooda timo badan leh ee lagama wado naag shuunkeeda mudo xiirin oo ku batay oo soo dheeraaday.
Naagaha jirka timaha ku leh shuunkooda wuxuu soo gaaraa ilaa gumaarka korkiisa inta u dhow buufka, sidoo kale dabada afkeedana shuun ayay ka leeyihiin iyo cajiraha oo siilka higa, sidoo kale kilkilahana iyo dhudhumada timo badan ayay ku leeyihiin.
Naagaha waxaa lagu gartaa xaadada qoorta iyo faruurta kore ayay timo khafiif ku qabaan, dumarkaas kacsigooda wuu ka fiican yahay kuwa kale, shiikoodana waa badan yahay, siiba marka ay buuran yihiin, qaar waxaa jira mayiika ku darsaday iyo qooq.
Shuunka haddii ay dayso gabadha kacsiga miyuu yareeyaa? waxaa la sheegaa shuunka marka la daayo qofka dareenkiisa wuu yaraadaa nin iyo naagba, marka la xiiro meesha waxay keenaysaa cucnun oo kacsi keeni kara, waayo cununka iyo kacsiga xiriir baa ka dhexeeya, haweenka dabada laga cuno futada ayaa ka cuncunta markaas ayay raadiyaan in wax laga galiyo, marka shuun iyo shiir sheeko ayaa ka dhexeysa.